Apple Pay ayaa dhawaan heli doonta dadka isticmaala Faransiiska ee kaarka gaadiidka Smart Navigo | Waxaan ka socdaa mac
Sida muuqata Apple waxay heshiis la gashay kaarka Smart Navigo ee isku xirka gaadiidka Paris si ay uga shaqeeyaan Apple Pay. Sidaa darteed, isticmaaleyaashu waxay awoodi doonaan inay galaan basaska iyo nidaamka mitrooga, laga bilaabo Febraayo 2021. Waqtigaan la joogo Apple ama Île-de-France-Mobilités midkoodna ma uusan xaqiijin. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in dhibaatooyinka aan joojin isticmaalka isticmaalkiisa ilaa hada ay gebi ahaanba baaba'een.
Smart Navigo oo bilaabaya Apple Pay bishii Febraayo: ayaa la cusbooneysiiyay Janaayo 20 Navigo Easy card iPhone recharge service start https://t.co/fMGJwcdxoX pic.twitter.com/rwqrhOSMws
- Fogaanta Ata (@Kanjo) January 7, 2021
Smart Navigo, oo ah kaarka transit-ka mobilka ee magaalada, ayaa la bilaabay Sebtember 2019. Si kastaba ha noqotee, guusheeda waxaa mugdi geliyay baahida loo qabo xaqiijin sugan oo toos ah. Tani sidoo kale waa sababta sababta Apple Pay hadda aan loo hirgelin karin inay bixiso safarka isticmaalaha, sida waxay ka hortagi laheyd xaqiijinta Navigo.
Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo Febraayo, isticmaalayaashu waxay awoodi doonaan inay ku daraan kaarka Smart Navigo Apple Wallet. Tani waxay u oggolaaneysaa ‌iPhone‌ ama Apple Watch inay fududeeyaan socdaalka magaalada. Sidoo kale isticmaalayaasha hore u bixin karaa tikidhada dhulka hoostiisa mara oo leh 'Apple Pay‌'. Oo ay ku jiraan kaarka toddobaadlaha ama billaha ah, kuna dar kaarkaaga Navigo ee ku jira boorsada.
Waa lagama maarmaan in xaqiijinta amniga ah ee Smart Navigo ay ku faanto in laga takhaluso mararka qaar sannadkan 2021 iyadoo loo adeegsanayo gaadiidka Faransiiska. Tani waxay u oggolaaneysaa 'Apple Pay‌' toos loo isticmaali karo inaad uga gudubto shabakadaha gaadiidka dadweynaha sida ay uga gudbaan London ama New York. By the way the last, maalmo ka hor ayaa la shaaciyey in horey loo sii kordhiyey iyo Apple Pay waxaa loo isticmaali karaa dhammaan shabakaddaada iyada oo aan la kala soocin.
Waa inaan sugnaa sugida labada shirkadood midkood si uu u ogaado bal in warkani run noqdo. Hubi in isticmaaleyaal badani ay rajeynayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Pay » Apple Pay ayaa dhawaan heli doonta dadka isticmaala Faransiiska ee kaarka gaadiidka Smart Navigo
Qalabka Nomad ee xaday ee Apple AirTags